स्वस्थ मानिसले दिनमा कती मासु खाने ? «
स्वस्थ मानिसले दिनमा कती मासु खाने ?
प्रकाशित मिति : 8 October, 2019 8:30 am
मासुबाट प्याप्त प्रोटिन हुने हुदाँ थोरै मात्रामा सेवन गर्दा पनि शरिरलाई पुग्ने हुन्छ । दसैंमा अधिकांशको बानी के हुन्छ, भने मासु बढी खाने र अन्य साग सब्जी कम खाने तर त्यस्तो गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको पाइन्छ । एकै पटक धेरै मासु खानु हुँदैन । एउटा स्वस्थ्य मानिसले दिनमा एक सय ग्राम सम्म मासु खान सक्छन् । स्वास्थ्य र सफा मासु हुनुपर्छ ।
तर कुनै पनि रोगहरु छ भने खानु हँुदैन । एउटा सानो कचौरामा मासु र अरु मौसमी फलफूल र साग सब्जी खानुपर्छ । छाला, कलेजो र वोसो खानुहँुदैन । हामीले खाना स्वस्थ्यको औाषधीको रुपमा खानुपर्छ । तर हामीले खानेखाना र मासु कतिको स्वास्थ्य छ । त्यसमा ध्यान नदिँदा हामीलाई विभिन्न रोगहरु देखिन्छन् ।
मासु खाने तर शारीरिक व्यायाम नगर्ने लामो समय सम्म एकै स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ । जसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुन्छ । शारीरिक व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ । अत्यधिक चिल्लो मसलेदार मासुले विभिन्न रोगका बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईंको रोगहरु अझ बढ्ने हुन्छ ।
त्यस्तो समस्या आउन नदिन स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर मौसम अनुसारको फलफुल र साग सब्जी बढी खाने थौरै मात्रामा सादा मासु खाँदा खासै असर गर्दैन । पोलेको, साँधेको मासुले क्यान्सर गराउने हुन्छ भने पाचन प्रणालीमा समेत समस्या निम्त्याएको पाइन्छ । क्यान्सर मुटु, युरिक एसिड मधुमेहका बिरामीहरुले सकेसम्म रातो मासु खानु हुँदैन् ।
रक्तचाप र युरिक एसिडको समस्या भएकाले शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी मासु खाँदा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने हुन्छ । यस्ता बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर चिल्लो, नुन र मसला कम राखेर खानुपर्छ । काचो मासु खानु हुँदैन । मासुलाई राम्रो सँग पकाएर खानुपर्छ । सकेसम्म लामो समय सम्म मासु राख्नु हुँदैन् । यदि मासुलाई धेरै दिनसम्म राख्नुपरेमा पनि फ्रिजमा राख्नुपर्छ । मासु पकाउदा थोरै मसला, चिल्लो र नुन राखेर पकाएर खाएमा स्वस्थ्यकर हुन्छ ।
(पोषणविद् कविता महर्जनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)